Härjedalen, markii dhul ahaan loo fiiriyo waxeey ka mid tahay degmooyinka Iswiidhan ugu weeyh, ayadoo ee weeynikeedu uu dhanyahay 11 934 kilimotiirkaba labajibbarkiisa, boos ku filan uu heeyso qof kasto oo ku dhex nool. Halkaan waxaa laga helaa buuro, wabiyo yar iyo jiqooyin taasoo diyaar ulu ah qofkii doonaayo howlo xilliga xagaaga iyo jiilaal. ”Härjedalenta wanaagsan” waxeey lee dahay tamar-nololeed, asal iyo dhawaansho – taasi waa qiimaha-koobnaanshaha ka jiro degmada Härjedelan oo raad kuu reebaayo hoowlaheena iyo mabda’eena.
Waxaa fursad loo lee yahay in Härjedalen laga helo degaan kala duwan. Waxaa la dooraan karaa in guri gaar ah laga gato gudaha bulshada ama baadiyaha, ama guri sar ka mid ah ayaa laga kireeynsan karaa ama laga iibsan karaa bulshada gudaheed. Degmada waxeey lee dahay shirkad-guriyeed oo kireeyso guriyaal laakin waxa sido kale jiro shirkado gaar ah oo guriyaal kireeyo. In kale oo ku saabsan oo gurida Härjdelan, ka akhriso bogga degmada​.​
Ilaa hada Härjedalen waxaa ku yaalo lee ururada kanisadeed ee iswiidhishka ah. Kaniisada Iswiidhan iyo ururo diimeed oo kale ayaa howlo uu qabqaabiyo soo galooytiga cusub, oo dadka dhan lagu soo dhaweeynaayo, diinti rabaan ha heeysteen.​
Härjedalen waxaa ka jiro ururo badan oo kala duwan. Bogga internetka ee degmada waxaa ku jiro isku-xidh ku socdo ururada dhamaantooda.
Hey'adda laanta socdaalka waxeey xafiis ku lee dahay Sveg, waxuuna xafiiskas raacinaayaa Hede, Lillhärdal iyo Ytterhogdal. Xafiiska Shaqada waxuu ku yaalaa Sveg, sido kale waxuu xafiis ku lee yahay Hede oo loogu tala galay booqasho balan leh. Xafiiska qasnada ceeymiska, Hey'adda howlgabka iyo xafiiska canshuuraha waxeey xafiis-adegeed ku lee yihiin Sveg.
Dugsiga xanaanada​ waa tilabaada koobaad ee nidaamka-waxbarashada iyo waxbarashada nolosha oo dhan. Halkaan caruurteena waxaa la doonaa in ee ku hormaraan be'yad xiso leh laakin hadana aamin ah.
Fikrada laga lee yahay ayaa ah in ka qaayb qaadashada keento kormeer dheeraad ah iyo isfahmid iyo mas'uulqaadin badaneeyso – ihtimaam sii weeynaado iyo isgarabsiin waxeey keeyneeysaa amaan iyo isku-xidhnaan ee dhanka caruurta iyo waalidiintaba ah.​
Iskuulada leh fasalka 7-9:aad waxeey ku yaalaan Sveg, Hede, Funäsdalen iyo Ytterhogdal. In kale oo ku saabsan dugsiyada hoose-dhexe ee Härjedalen​.​
Dugsiga sare ee Härjedalen ​waa dugsi sare oo yar oo soo bandhigaayo barnaamijyo badan. Ardaydeenu weey ku faraxsan yihiin, waxeeyna bey'adeena iskuuleed ku dareemaayaan amaan laakin intas oo dhan waxaa ka horeeyo, ardaydeenu weey ku hormaraan waxbarashadooda.
Laga yaabaa in ee tahay kafeetiriyadeena, goobteena-la kulameed oo dabiicga ah, laga yaabaa in ee sabab uu yihiin shaqaalaha ihtimaam siinaayo oo ardaydeenu sido kale siinaayo dareen-amaan, kuna hormaraan waxbarashadooda oo ilaa heerkaas sare gaarsiiyo. Sababto nuucee rabto ha ahaate, waxaan rijeeyneeynaa in aad Adiga hesho dugsi sare oo Adiga kuu haboon, iyo in aad noqoto qof si fiican loo diyaariyay, ayadoo loo fiirin haddii aad Adiga doorato in aad waxbarashada wadato ama shaqo si toos ah uu raadsato kadib markii aad ka qalin-qabiso dugsi sare ee Härjedalen.​
Härjedalen waxaa laga helaa waxbarasho-dadka waa weeyn,​ waxa ku jiro waxa ka mid ah barashada luuqada iswiiidhishka, waxbarashada bulshada, waxbarashada asaasiga ee dadka waa weeyn, waxbarasho dugsiga sare oo loogu tala galay dadka waa weeyn iyo fursado ku saabsan waxbarasho-jaamacadeed oo lagu dhiganaayo masaafad. Sido kale hal dugsig ee ah nuuca la seexdo ee dadka waa weeyn ayaa ku yaalo Sveg, Dugsi dadka waa weeyn ee Bäckedals.
Xarun-caafimaadeed​ ayaa Härjedalen uga taalo meelaha soo socdo: Funäsdalen, Hede iyo Sveg. Ytterhogdalen waxaa ku taalo qaabilaad loogu tala galay booqosho la balansaday. Faramashiye waxuu ku yaalaa Funäsdalen, Hede iyo Sveg. Meelo badan ayaa leh wakiil-farmashiye, iyo dukaamo badan ayaa gado daawooyin oo aan looga baahneen waraaqad dhakhtareed. Dhakhtarka ilkaha waxaa laga helaa Funäsdalen, Hede iyo Sveg. Tolkhjälp Caawinaad turjumaad qeeybta hey’adaha xukuumadeed iyo degmadeed waa loo helaa. Markii aad booqashadaada balan uu sameeysaneyso, sheego in aad caawinaad-turjumaan rabto. Degmada gudaheed waxaa ku taalo qeeyb la yiraahdo adeega-isdhexgalka. Qeeybtaas shaqadeeda waxaa ka mid ah caawinaad-luuqadeed oo loogu tala galay soo galooytiga cusub oo ku qoran degmada Härjedalen. Shaqaalaha joogo adeega-isdhexgalka ayaa ka warami kara caawinaada la heli karo.
Habab kala duwan ayaa loogu soo safri karaa Härjedalen, diyaarad, baabuur, bas iyo tareen. Bogga internetka ee degmada waxaa laga helaa ​warbixin iyo jadwalka-imaanshaha​.​
Degmada Härjedalen waa shaqo dhiibaha ugu weeyn ee degmada. Shaqada nuuca rabto ahaaate, marba haddii shaqo la hayo sidii shaqada kalkaalisada, mas’uulka-goobta shaqada, la taliyaha dhanka shaqaalaha ama madax-howl, shaqaalaha dhamaantood door muhiim ah ayee ku lee yihiin degmada Härjedalen. Si wadajir ah ayaan uga shaqeeyneeynaa in bulshada kala socoto, taasi oo ah mid qiimaheedu aad uu badan yahay. In kale oo ku saabsan shaqooyinka ka banaan degmada​.
SYKES waa shirkad caalami ah oo 35 sano ka badan khibrad uu leh, lehna ka badan 75 oo xarun iyo shaqaale dhaafaayo 46000 caalamka oo dhan. Sykes waxeey ka hoowl gashaa BPO (Business Process Outsourcing), waxeeyna ka gudo gashaa adeega-macmiilka, caawinaad farsamo iyo uu iibinta shirkada yare ee degmadeed iyo kuwo caalami ah oo weeyn. Härjedalen dad badan ayaa uu imaado fasax, waana la imaada mudada xiliyada fasaxa. Taasi waxeey keeneeysaa in shaqooyin badan ka banaadaaan dalxiiska. Qeeybaha weeyn ee dalixiska Härjedalen waa Vemdalen, Lofsdalen iyo Funäsfjällen.
Säsongsarbete på ICA Vemdalen Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Vägassistent sökes till Vemdalsområdet Bilbärgare
Ta chansen att bo och arbeta som Sjuksköterska i fjällen Distriktssköterska
Områdeschef elnät Distributionschef, energi
Projektledare elnät Projektledare, bygg och anläggning
Dua Koordinator Servicehandläggare
Träslöjdslärare / vaktmästare Norra skolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare i svenska för invandrare SFI och grundläggande utbildning i svenska Lärare i gymnasiet
Redovisningsassistent till LRF Konsult Redovisningsassistent
Skogsarbetare röjning Skogsarbetare, röjning
Redovisningskonsult till LRF Konsult , Härjedalen Redovisningskonsult
Sydsamisk förskollärare eller samisktalande med annan pedagogisk erfarenhet Lärare i förskola/Förskollärare
Skogskonsulent till Södra Jämtland distrikt Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
Butiksmedarbetare till varuplock i Sveg Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Lärare på Handels - och administrationsprgorammet Lärare i gymnasiet
11 934 km2
Östersund 18 mil
Ljusdal 11 mil
Hudiksvall 17 mil
Mora 14 mil